Ama-Mews antofontofo - I-Airbnb
U-Grace Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elicocekile, elihle, elitholakala kalula efulethini elinekamelo lokulala elilodwa elisenkabeni ye-Harare Central Business District . Ukuvimba okuphephile kakhulu kwamafulethi anomuntu onogada imini nobusuku , eduze kwamasevisi amaningi, Izitolo, Izibhedlela, Amafamasi, Odokotela, Amabhange, Izitolo ezinkulu, nezindawo zokudlela . Indawo efanelekayo yezivakashi zebhizinisi nezokungcebeleka.
Ngenxa yendawo yayo ye-Prime, ifulethi alihlangabezani nokunqamuka kogesi okuhlangenwe nakho ezindaweni eziningi e-Harare. Kukhethwe mahhala endaweni yokupaka
Ifulethi lokuziphekela elisanda kulungiswa elihlalisa izivakashi ezingu-2. Ihlanganisa ikamelo lokulala elilodwa
/Igumbi lokuphumula/Ikhishi/Ubhavu/Ishawa elishisayo/Indlu yangasese kanye ne-Balcony. Ikamelo lokuphumula lihlanganisa usofa wokungcebeleka kanye nedeski elinezihlalo ezingu-2 ezinethezekile ongasebenza kuzo. Ikhishi linesitofu sepuleti esishisayo esingu-4, Ifriji, i-Microwave, i-Jug, ukupheka kanye nezitsha zokuphaka. Umbhede omkhulu, Indlu yokugezela inobhavu neshawa.
I-WiFi ne-DSTV kuyatholakala
Ifulethi litholakala endaweni ephephile. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya e- CBD , Inxanxathela Yezitolo Zokuthenga, Izindawo Zasebhange, Izikole, amahhovisi kaHulumeni nawo wonke amasevisi . Eduze ne-Nice Harare Gardens , i-The American Embassy ne-The Art Gallery .
Kukhona i-Mall ngaphesheya komgwaqo nesitolo esincane sokudla lapho umuntu engathola khona isinkwa esisha, imifino nezinto zokudla. Isitolo se-Econet, i-Boutique, i-Hair Saloon, i-Dry Cleaners, Isitolo Sezithombe, i-Phamarreon nokunye okuningi. Emgwaqweni ofanayo sinezibhedlela ezinkulu ezizimele noHulumeni kanye namakamelo ezimo eziphuthumayo amahora angu-24 aqhelelene.
Ngitholakala kalula ukunikeza izivakashi usizo kukho konke ukuhlala kwazo lapho zidinga.
Ngifinyeleleka ocingweni lwami lweselula, ezingcingweni zezwi, nge-sms, noma nge-imeyili (Nge-Airbnb)